Kedu ụzọ mbube ozi ị na-eji?
Anyị na-eji Royal Mail maka ndị ahịa mba ụwa na ndị ahịa UK, Royal Mail na DPD.
Enweghi m njikọ na-esochi, ebee ka ngwugwu m dị?
Kwesịrị ịnata nọmba nsuso na email nkwenye gị na mbupu. Dabere na usoro ozi nke ozi ị họọrọ, ị ga-enwe ike iji nọmba a na
DPD nsuso njikọ - https://www.dpd.co.uk/service/
Royal Mail nsuso njikọ - https://www.royalmail.com/track-your-item#/
Kedu ihe m kwesiri ime ma ọ bụrụ na akabatabeghị ihe m?
Deliverybọchị nnyefe e mere atụmatụ gị dị na email Nkwenye Iwu gị - biko kwe ka ụbọchị a ga-abịa maka iwu gị.
You'll ga-enwe ike nweta mmelite kachasị ọhụrụ na iwu gị site na ịpị njikọ njikọta na email nkwenye gị na mbupu. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịbanye 'Akaụntụ M' wee pịa 'Sochie Usoro a'.
Gị nsuso njikọ ga-enwe ike inye ruo ụbọchị ọmụma na ọnọdụ nke gị iji.
Ọ bụrụ na ụbọchị nnyefe gị e mere atụmatụ gafere ma ị anatabeghị iwu gị, biko kpọtụrụ na sales@sarmsstore.co.uk
Enwere m ike ịgbaso nnyefe nke usoro m?
Ọ bụrụ na ezitere gị iwu gị site na iji ọrụ trackable, ị nwere ike ịgbaso njem ya maka gị. Ga-enweta nkwenye nkwenye na mbupu site na ụlọ nkwakọba ihe anyị ozugbo usoro gị dị n'ụzọ ya; nanị pịa na nsuso njikọ gị na email a ka ịlele nsuso oge.
Enwere m ike ibugharị ngwugwu m gaa na adreesị ọzọ?
Maka nche gị, anyị enweghị ike ịgbanwe adreesị iwu gị na-ezigara. Echegbula - ma ọ bụrụ na ịnọghị mgbe nnyefe nnyefe na-anwa onye anyị ga-enyefe ga-ahapụ kaadị na-adụ ọdụ otu esi ahazi mgbapụta ma ọ bụ ebe ịnwere ike iburu ngwugwu gị.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na anọghị m mgbe usoro m rutere?
Otu onye kwesiri inonye mgbe a ga-eweputa ngwugwu gi dika anyi choro mbinye aka. Agbanyeghị, echegbula ma ọ bụrụ na nke a agaghị ekwe omume dịka onye na-eweta nnyefe anyị na-anwakarị ịnapụta karịa otu oge.
N'aka nke ọzọ, ha ga-ahapụ kaadị na-akwado na ha ahapụla ya na onye agbata obi ha, hapụ ya na ebe nchekwa, mgbe ha ga-anwa ịnyefe ma ọ bụ nye gị nkọwa gbasara otu esi anakọta ya.
My iji ọnọdụ na-ekwu “emezughị” gịnị mere na ọ bụghị Ẹnam ekese ma?
Ọ bụrụ na ọnọdụ nke iwu gị na-egosi dị ka 'emezughị,' ọ pụtara na anyị na-arụsi ọrụ ike ịhazi iwu gị ka eziga gị.
N'oge ọrụ oge, ọnọdụ a nwere ike igosi na iwu gị karịa ogologo oge. Deliverybọchị nnyefe e mere atụmatụ gị dị na email nkwenye gị wee tinye oge ọ na-ewe ka anyị were usoro gị.
Ga-enweta email ọzọ mgbe anyị zitere gị iwu gị, nke ga-agụnye njikọ nsuso ma ọ bụrụ na ezitere iwu gị na otu n'ime ọrụ nnyefe anyị nwere ike ịga.
Kedu ihe nkwakọ ngwaahịa gị dị?
Anyị na-ahụ na nkwakọ ngwaahịa anyị niile nwere ezi uche, na-enweghị akwụkwọ mmado na-akpọ aha ụlọ ọrụ na ngwugwu larịị.
Enwere m ike ịmezigharị iwu m mgbe etinyechara ya?
Anyị bụ ndị ngwa ngwa na mbukota gị iji, nke pụtara na anyị ga-enwe ike ịgbanwe gị iji ozugbo ị mere ya. Nke a gụnyere ịgbanwe nhọrọ nnyefe, adreesị nnyefe ma ọ bụ ngwaahịa na usoro.
M nyere iwu ihe na mberede, gịnị ka m ga-eme?
Dika anyi enweghi ike igbanwe usoro gi mgbe itinyere ya, inata ihe ichoghi. Biko mee ka anyị mara sales@sarmsstore.co.uk. Nwere ike izighachiri anyị ya, anyị ga-akwụghachi ma ọ bụ gbanwere iwu gị ozugbo ọ lọtara n'ụlọ nkwakọba ihe anyị.
Biko tinye ihe edeturu na ngwugwu gị ka anyị mara na itinye iwu ahụ ọhụma mgbe ịzighachiri ya. Jụọ maka ihe akaebe nke akwụkwọ ozi ma hụ na ị na-echekwa ya ma ọ bụrụ na anyị ga-ele ya anya ma emesịa.
Enwere m ihe ezighi ezi n'usoro m, kedu ihe m ga-eme?
Anyị chọrọ idozi nsogbu ọ bụla na ihe na-ekwesịghị ekwesị.
Ọ bụrụ na otu n’ime ihe ị nwetara abụghị ihe ị nyere iwu, biko mee ka anyị mara sales@sarmsstore.co.uk, na anyị ga-ezitere gị ihe ziri ezi gị ngwa ngwa o kwere mee. Anyị ga-arịọ gị ka ị zitere anyị ihe ezighi ezi.
Biko tinye ihe edeturu na ngwugwu gị ka anyị mara na ọ dị ezighi ezi mgbe ị zighachiri ya. Jụọ maka ihe akaebe nke akwụkwọ ozi ma hụ na ị na-echekwa ya ma ọ bụrụ na anyị ga-ele ya anya ma emesịa.
Ana m efu ihe n’usoro m, kedụ ihe m ga-eme?
Ọ bụrụ na ihe na-efu, biko kpọtụrụ anyị na sales@sarmsstore.co.uk nwere nọmba ịtụ na aha ihe ahụ na-efu. Anyị ga-edozi gị okwu a ka anyị nwere ike.
Ngwaahịa na Ngwaahịa
Kedụ ka m ga - esi chọọ ihe na weebụsaịtị?
I ma ihe ị na-achọ? Ọ bụrụ otu a, pịnye ya n'ime igbe nchọta dị n'elu elu ibe ọ bụla ma pịa igwe na-eto eto.
Nwere ike ịnye m ozi ndị ọzọ gbasara ngwaahịa gị?
Anyị na-anwa ịnye gị ozi bara uru dịka anyị nwere ike gbasara ngwaahịa anyị niile, gụnyere:
Asambodo nyocha sitere na isi nke ato.
General nkọwapụta nke ngwaahịa
Otu esi eji ngwaahịa a - gunyere ogologo oge okirikiri, onunu ogwu maka nwoke na nwanyi, na okara ndu.
Gịnị tojupụtara ya
Ọ bụrụ na ịchọrọ PCT na ngwaahịa a.
You ga-enweta ngwaahịa ndị ọzọ?
Anyị na-anwa imelite ọnụọgụ anyị site na ngwaahịa ọhụụ oge ọ bụla anyị nwere ike, nke pụtara na anyị na-etinye oge dị ukwuu na-anwa ịme ngwaahịa ọhụrụ zuru oke, yabụ lelee anya gị!
You na-ewepu ego n'ahịa maka ịzụrụ nnukwu ego?
Ndị na-ekesa anyị ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-achọ ndị na-ere ahịa. Biko lee https://bodybuiltlabs.co.uk/a/wsg/proxy/signup maka nkọwa ndị ọzọ.
Kedu ka m si mara na ngwaahịa gị ziri ezi?
Na SarmsStore, anyị na-ewepụta ngwaahịa ndị ziri ezi na nke ziri ezi, anyị anaghị ere adịgboroja, yabụ ị nwere ike ijide n'aka na ihe ị nwetara bụ ezigbo. Anyị nwere nsonaazụ ụlọ nyocha nke atọ nwere ike ịchọta na weebụsaịtị anyị, na ibe ngwaahịa na ngalaba onyonyo.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnweghị obi anụrị na ihe gị, ị na-anabata gị iji weghachite anyị maka nkwụghachi zuru ezu, ọ bụrụhaala na emepebeghị ngwaahịa ahụ.
Ngwaahịa gị ọ ziri ezi?
A na-anwale ngwaahịa anyị niile maka ịdị ọcha na nsonaazụ ya nwere ike ịchọta na weebụsaịtị anyị. Ejiri ebe a: https://sarmsstore.co.uk/
Ngwaahịa gị ọ na-arụ ọrụ?
Anyị bụ ndị na-ere ahịa SARM na Europe ngwaahịa anyị bụ ịdị ọcha kachasị elu ị nwere ike inweta. Nyocha anyị na weebụsaịtị anyị, Pilot Trust na forums kwesịrị inye gị obi ike.
You na-eweghachi ụgwọ nnyefe ma ọ bụrụ na m weghachite ihe?
Ee e, anyị adịghị.
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na nkwụghachi m ezighi ezi?
Anyị nwere nwute n’ezie ma ọ bụrụ na anyị mehiere na nkwụghachi gị!
Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe biko kpọtụrụ anyị site na iji na sales@sarmsstore.co.uk na anyị ga-anwale ma doziere gị ya ozugbo enwere ike.
Gịnị mere enwetabeghi nkwụghachi m?
ịnkwụghachi r nwere ike iburu n’etiti ụbọchị 5-10 iji rụọ ọrụ na akaụntụ gị ozugbo emechara ya. Biko chere maka oge a ewepụtara tupu gị akpọtụrụ anyị.
A bu m onye ahia UK, inwetala ihe m laghachi?
O nwere ike iburu ihe ruru ụbọchị asaa arụ ọrụ (ewepu ụbọchị ngwụcha izu na ezumike ụlọ akụ) site n’ụbọchị mgbe ụbọchị ị lọghachitere, ka eweghachite ngwugwu gị n’ụlọ nkwakọba ihe anyị ma hazie ya.
Anyị ga-ezitere gị email ozugbo anyị natara nloghachi gị, na-agwa gị usoro ndị ọzọ.
Kedu ihe bụ iwu ịlaghachi azụ?
A ga-eweghachi ihe na ọnọdụ mbụ ha ma mepeghị, n'ime ụbọchị 30 nke ụbọchị ị natara ya. Anyị nwere ike ịnye nkwụghachi zuru ezu maka ọnụahịa ị kwụrụ.
Maka ozi ndị ọzọ banyere nloghachi anyị, biko lelee ibe anyị: https://sarmsstore.co.uk/pages/refund-policy
Enwere m ike ịkwụ ụgwọ site na iji PayPal?
Ugbu a anyị anaghị anabata Paypal site na weebụsaịtị anyị.
Kedu ụdị ụdị ịkwụ ụgwọ ị na-anabata?
Anyị na-anabata kaadị akwụmụgwọ niile na kaadị debit, yana bitcoin.
Enwere m ike ịkwụ ụgwọ mgbe m nwetara ngwaahịa ahụ?
A ga-ewepu ego ahụ na akaụntụ gị n'oge ị nyere iwu gị.
Kedu ihe kpatara koodu ego anaghị arụ ọrụ?
Biko hụ na ị tinyela koodu ego ahụ n'ụzọ ziri ezi na ngalaba ego, ị ga-ahụ mbelata ego a na-agbakwunye na iwu gị mgbe etinyere ya n'ụzọ ziri ezi.
Ego ole ka m ga-akwụ maka mbupu?
Anyị na-enye mbupu zuru ụwa ọnụ n'efu. Anyị na-enye ọrụ a na-akwụ ụgwọ, nke dabere na nkwụnye ego na mmachi nke obodo gị, na-ekwe nkwa ịnye ngwugwu gị n'oge na-adịghị anya.